Maxaa Imaaraadka ku kalifay inay xilligan laaluushaan Maxamed Xuseen Rooble - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maxaa Imaaraadka ku kalifay inay xilligan laaluushaan Maxamed Xuseen Rooble
Waxa usbuucii hore ka dhacday magaalada Muqdisho fadeexadii ugu xumayd markii gunti giijiye Rooble lagu arkay garoonka magaalada maalin Jimce ah asagoo tuugaya safiirka Imaaraadka. ”Weligay ma arag qof ka aradan dawladnimada ayuu yiri Cali Calasow.
Xitaa kuwa sheegta inay ka soo horjeedaan dawlada uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ee sida qabaliga ah uga soo horjeeda ayaa isku raacay in meesha uu Maxamed Xuseen Rooble wax ka raadinayo ay tahay sharaf dhac.
Madaxweynaha ayaa lagu yaqaan inuu ka jecel yahay inuu ciida cuno halkii uu isku dhiibi lahaa qayrkii asagoo shilimaad qaadanaaya ayuu raaciyay Cali Calasow.
Haddaba maxaa ku kalifay Imaaraadka inay xilligan dib u soo raadsadaan lacagta ay tuugnimada ku soo geliyeen dalka ayagoo u soo maraya laaluush qaate Maxamed Xuseen Rooble oo sida la sheegay ay u balan qaadeen inuu qaybtiisa qaato.
Jawaabta ugu fudud ayaa ah inay is leeyihiin hadda la baxa inta madaxweynaha hadda talada haya aan dib loo dooran ayuu qabaa Xuseen Warsame. Gunti giijiye Rooble ayaa ku fashilmay inuu lacagtaa la baxo, asagoo dhinaca kale isku dayay inuu furo gacan madaarka Muqdisho ku yaala oo laga xiray kooxda Xalane.